बधाई ! अर्काको घरमा भाडा माझ्दै हुर्काएकाे छाेरा बन्याे ‘इन्डियन बेस्ट डान्सर’ (बधाई दिनुहाेला) - Onlines Time
बधाई ! अर्काको घरमा भाडा माझ्दै हुर्काएकाे छाेरा बन्याे ‘इन्डियन बेस्ट डान्सर’
इन्डियन बेस्ट डान्सर’ को उपाधि टाइगर पप उर्फ अजय सिंहले जितेका छन् । आफ्नो अभिनयबाट दर्शकको मनमा बसेका अजय सिंहले मुकुल गैन,श्वेता वारियर्स, परमदिप सिँहलाई पछि पार्दै ‘इन्डियन बेस्ट डान्सर’ २०२० काे टाइटल जितेका हुन् ।
उनले एक अन्तर्वातामा भनेका छन् ‘गुरुग्रामबाट यही सपना बोकेर म मुम्बई आएको थिएँ । मलाई जसरी पनि यो सो जित्नु थियो । मलाई यो सपना पुरा गर्नको लागि धेरै सघर्ष गर्नु पर्यो । मैले यो सोबाट निकै मिठो अनुभव लिएको छु ।
सुरुमा मलाई कलेज र स्टेजका मानिसहरुले मात्र प्रसंसा गर्थे अहिले मलाई देशले नै प्रसंसा गर्छन । अडिसनको समयमा आमाको सिर झुकेको थियो । जुन दिन मैले निते त्यो दिन पनि आमाको सिर झुकेको थियो । उनी निकै साधारण छिन् । उनी अर्काको घरमा भाडा माझने काम गर्थिन । अब म त्यो काम गर्न दिनन । मैले ट्रफी जितेर घर पुग्दा आमा धेरै रोएकी थिइन् ।
Prevविवाह गरिदिने आमाबुवाको सपना अधुरै बनाएर अस्ताए प्रहरी इन्सपेक्टर बुढाथोकी, पुरै गाउँ शो’कमा डुब्यो
Nextबुवाले गरे छोराले बुहारी का’ ट्नुको सनस’नीपूर्ण खु”लाशा, वास्तविकता सुन्दा हो’स उ’ड्यो (भिडियो हेर्नुहोस्)